छत्र शाही र काजलको जोडी सुहाउने भएपछि छत्रले लगाइदिए सिन्दुर (भिडियाेमा हेर्नुस्) – Sandesh Press
July 11, 2021 260
छत्र शाही र काजलको जोडी सुहाउने भएपछि छत्रले लगाइदिए सिन्दुर (भिडियाेमा हेर्नुस्) । यो बेला दोहोरी बाट सबैको मन मुटुमा बसेका चर्चित गायक छत्र साही र काजलले मन्दिरमा गएर बिहे गरेको भिडियो बाहिरिएको छ ।
केहि समय अगाडी उनीहरुले बिहे गरेको भिडियो `एस थ्री के´ युटुव च्यानले सार्बजनिक गरेको हो।छत्र र काजल इन्द्रेणीको लाइभ दोहोरीबाट सबैको मन मुटुमा बसेको जोडी हो तर यो पर्दामा सिमित छ । नेपाली गित संगीतको बजारमा एक पछी अर्को गित बजारमा आईरहेका बेला पछिल्लो समय निकै नै भाईरल बनेका ईन्द्रेणीमा लाईभ दोहोरि गाएर,
निकै नै लोकप्रियता कमाएका छत्र शाही र काजल जोशीको पहिलो गित`हाम्रो जोडी जम्छ´बोलको गित सार्वजनिक भएको छ । राजेन्द्र बजगाईले एरेन्ज गरेको गीतको शब्द तथा संगीत सर्जक प्रेम सागर पौडेलले गरेका हुन् ।
देबेन्द्र कुँवरले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियो चक्र बरालले छायांकन गरेका हुन् भने दिन्सन शाहले म्युजिक भिडियो सम्पादन गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोमा काजल जोशी र क्षत्र शाहीको रमाइलाे अभिनय समेत हेर्न सकिन्छ:
Prevअवैध रुपमा प्रयोगमा आएको मोबाइल पहिचान गर्न सुरु
Nextजसले मेस्सीलाई जबरजस्ती मैदानमा खेल्न पठाएका थिए, त्यसपछि मेस्सीले बनाए विश्व रेकर्ड को हुन् उनी ?
विभिन्न समस्या समाधान गर्नका लागि फिटकिरीको प्रयोगको बारेमा सबैले जानिराखौँ ! यति धेरै रोगको उपचारको लागि काम लाग्छ
कोरोनाबाट बच्न प्रयोग गर्नुस् यी आयुर्वेदिक औषधि
तपाँहरूलाई थाहा छ ? नेपाली नोटहरू कहाँ र कसरी छापिन्छन् ? हेर्नुहोस् भिडियो